Hot Now | Bartamaha
SAWIRO IYO CODOD: Shacab ku nool Deegaanka Gubadley guryahoodii la burburiyay	By Staff
Feb 13, 2015	Shacab ku noolaa Deegaan Gubadley ee Duleedka Magaalada Muqdisho ayaa Maalinimadii shalayto waxaa Guryahoodii Burburiyay Ciidamo ku libisan Dareeska Ciidamada Dowladda Federaalka Somaaliya kuwaa ay soo adeegsadeen dad kale uu sheeganayo in ay leeyihiin dulka.
Dadkaan Shacabka ah oo saxaafada geeye Goobta Guryahoodii lagu burburiyay ee Gubadley ayaa waxa ay sheegayaa in ay halkaasi Deganaayeen Mudo 30Sanadood ah iminkana ay Dowladda Federaalka ay ka dalbadeen in la siiyo aqoonsi iyo Ducuments ay ka ogolaaday Dowladda islamarkaana ay heystaan Ducuments sax ah oo ay siisay Dowladda kuna yaalo saxiixa Gudoomiyaha Gobolka Banaadir.
HADABO HALKAANI HOOSE KA DHAGEYSO SHACABKA GURYAHOODA LA BURBURIYAY:
DAAWO SAWIRADA HOOSE:
Share this: La Qeybso Asxaabtaada	Al Shabaab oo ka hadalay dagaalo ka kala dhacay Gobolada Banaadir iyo Gedo	By Staff
May 14, 2014	Afhayeenka Dhinaca howlgalada Xarakada Al-Shabaab Sheekh C/Casiis Abuu Muscab ayaa waxaa uu ka hadlay dagaal ay la galeen ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika Ee Amisom,waxaa uuna sheegay inay ciidamo fara badan ay ku dileen dagaalkii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo Degmada Buurdhuube Ee G/Gedo.
Abuu Muscab ayaa ku faanay inay xiligan awoodo ay yaraatay ciidamada dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM,waxaa uu ku hanjabay inay Sii wadi doonan dagaalka ay kal Soo horjeedaan dowlada iyo AMISOM.
dhanka kale Afhayeenka waxa uu baaq u diray shacabka soomaaliyeed kaas oo ku aadan in ay ka dheeraadaan goobaha ay ku sugan yihiin masuuliyiinta dawlada soomaaliya iyo kuwa shisheeye ee xiligaani ku suagan dalka soomaaliya .
Abuu muscab ayaa si cad u sheegay in dagaalyahanada alshabaab ay marwalba weerar ku yihiin goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada dowlada soomaaliya iyo kuwa midowga afrika ee amisom ee howgalka kawada dalka somaaliya.
Sikastaba hadalkani kasoo yeeray afhayeenka dhinaca howgalada Al-shabaab ayaa waxaa uu kusoo beegmaya xilli qaar kamida gobalda dalka ay ka socdaan dagaalo u dhaxeeya ciidamada dowlada oo garab ka helaaya kuwa amsom iyo xarakada Al-shabaab.
Share this: La Qeybso Asxaabtaada	Maxaa sababay in xiligaan Xasan Sheekh iscal la dhaho (Xog Muhiim ah)	By Staff
May 14, 2014	Xilli Magaaladda Muqdisho ay Caasimada dalka Soomaaliya ay taagantahay Xaalada siyaasadeed oo aad u kacsan oo ay fureyn qaar kamid ah Xildhibaanadda Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa soo baxayo Xog Culus oo ku aadan waxa sababay in Xiligaan Xasan Sheekh la yiraahdo iscali.
laba arrimood, ayaa la aaminsan yahay in ay ka dambeeyeen khilaafka soo kala dhex-galay Dowladda iyo Baarlamaanka, iyadoo ay dhabarka ka riixayeen Xildhibaano careysan.
Khilaafka 1aad ayaa waxa uu ka dhalashay markii Shirkadda laga lee yahay dalka Turkiga ee ka hawlgasha Garoonka Aadan Cadde, ay ka joojisay Shirkadda Supreme oo shidaalka ka iibin jirtay diyaaradaha ka hawlgala Garoonka.
Tani waxaa sabab looga dhigay, iyadoo Shirkadda FAVORI aynaan jirin cid la wadaagta adeegyada guud ee ka jira goobaha ay maamusho, taasina ay meesha ka saartay Shirkaddii Shidaalka ee Supreme, oo uu lee yahay Xildhibaan C.qaadir Cali Cosoble, oo ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya.
Khilaafka labaad, ayaa waxa uu asagana ka dhashay xil ka qaadistii lagu sameeyay Gudoomiye-yaashii Maamulada Degmooyinka Gobolka Banaadir, iyadoo ay xusid mudan tahay in Xildhibaano badan, ay dhaqaalo ka heli jirayn Gudoomiye-yaashii hore.
Xildhibaanada qaar oo Hoteelada Muqdisho ku degganaa bilaa lacag, ayaa waxaa dabari jiray Gudoomiye-yaashii xil ka qaadista lagu sameeyay bishii April, isla-markaana la magacaabay dhalinyaro yar yaro, oo aanba aqoon in la afgarto Xildhibaanada.
Xildhibaanadu waxay ka caroodeen, iyadoo ay meesha ka baxday faa’iidadii ay ku heysteen Gudoomiye-yaashii hore ee Degmooyinka Gobolka Banaadir, bacdamaa dhalinta la magacaabay noqdeen, kuwo aan ku luqad ahayn ama aysan isfahmeyn xildhibaanada.
Sidoo kale waxaa jira Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Somaliya oo ka qayb qaatay, soo jeedintii ahayd in uu is casilo Madaxweynaha Somaliya, kuwaa oo ujeedkoodii lagu macneeyay mid kursi la xiriirta.
Xildhibaanadaan waxaa la sheegay in Xukuumadii ugu dambeysay ay ka doonayeen in ay xilal ka qabtaan, laakiin aynaan taasi suurta gelin, culeysyo jiray awgeyd, ayagoona cudurdaar loo muujiyay.
Mudane-yaashaan oo ka soo kala jeeda Beelaha Soomaalida, ayaa waxaa soo badanaayay eedeymaha kala duwan ee loo jeedinaayo, markii ay horey u hamiyeen xilal ay ka qabtaan Xukuumada C.wali Sheekh Axmed Maxamed.
Dadaalada lagu kala jebiyay Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa waxay meesha ka saareysaa in xilligaan la rido Golaha Fulinta ayadoona sidoo kale u ogolaaneysa in ay sii amba qaadaan shaqooyinka horyaala.
Share this: La Qeybso Asxaabtaada	Dahir Amiin Jeesow: “Al-shabaab halala dagaalamo yaana loo kala harin”	By Staff
Apr 23, 2014	Gudoomiye kuxigeenka Gudiga Arrimaha Gudaha iyo Amniga Dahir Amiin Jeesow ayaa ugu baaqay Hey’adaha Ammaanka dowladda inay iska xil saaraan ammaanka Xildhibaanada Baarlamaanka.
“Kuwii horay loo dilay Xildhibaanada iyo kuwo labadii maalmood la dilay waxay isaga mid ahaayeen ilaalo ma heysan, waxaa ka dalbaneynaa Hey’adaha ammaanka dowladda in ilaalo loo sameeyo Xildhibaanada”ayuu yiri Dahir Amiin Jeesow.
Dhinaca kale Gudoomiyaha Gudiga difaaca Baarlamaanka Xuseen Carab Ciise ayaa sheegay in Baarlamaanka ogolaan doonin hadal ku kooban cambaareyn kaliya, waxaana uu cadeeyay in loo baahan yahay in Xildhibaan walba amnigiisa la sugaa.
“In Amnig dalka oo dhan la sugo, Xildhibaanada ammaankooda la sugo hadal dambe iyo cambaareyn ma yeeleyno, sidee xildhibaanka amnigiisa lagu sugi karaa, mala sugi karaa weeye, arrintaas waxaa ka sugeynaa Gudoonka Baarlamaanka iyo Xukuumada inay go’aan ka qaataan”ayuu yiri Xildhibaan Xuseen Carab Ciise.
Waxaa uu sheegay in hadii ay tahay in Xildhibaan walba uu isku tashato amnigiisa uu isaga sugto loo baahan yahay in la qayaxo sida uu yiri.
Gudiga Arrimaha Gudaha iyo Amniga Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku baaqay in ilaalo loo sameeyo Xildhibaanada Baarlamaanka, kadib markii labadii maalmood ee u dambeeyay magaalada Muqdisho loogu dilay labo Xildhibaan.
Xildhibaanada Baarlamaanka oo aan wada hubeysneyn ayaa waxaa soo wajahay walaac ku aadan amnigooda, kadib markii 24-saac gudahood lagu dilay labo xildhibaan halka mid kalena la dhaawacay.
Share this: La Qeybso Asxaabtaada	Madaxweynaha Banaadir State oo dowlada Soomaaliya eedeeye iyo arimo kale…	By Staff
Apr 23, 2014	Madaxweynaha Maamulka Banaadir State Md Cabdulaahi Axmed Maxamed C/laahi Dheere ayaa ka hadlay arimo kala duwan oo ay kamid tahay in Dowladda Soomaaliya ay ku fashilantay hanaankii Maamul usameynta Gobalada dalka Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa sheegay in hadii ay yihiin madaxda dawlad goboleydka Banaadir State ayaa Sheegay inay cambaareenayaan dilalka loo geeysanayo Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo lagu dilay degmooyinka Xamarweyne iyo Dharkeylay Ee G/Banaadir.
Madaxweynaha Banaadir State Md Cabdulaahi Axmed Maxamuud Cabdulaahi dheere ayaa ugu baaqay Golaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya inay ka shaqeeyaan sidii loo dhaqangelin lahaa Dastuurka Federaalka ah ee dalka u yaala, maadaama Wasiirada qaarkood ay ku tunteen Dastuurii dalka u yaalay.
Madaxweynaha Maamulka Banadir State ayaa dhanka kale sheegay in xubno ka tirsan maamulkaasi Dowladda Soomaaliya ay u xiran yihiin ayna ka xun yihiin tallaabada Dowladda ay ku caburinayso Muwaadiniinta iyo masuuliyiinta Maamulka Banaadir State.
Sidoo kale Cabdulaahi Dheere ayaa Sheegay in dowlada Soomaaliya ay ugu hanjabtay in la xiri doono Masuuliyiinta maamulka Banaadir State,oo ugu horeeyo isaga Sida uu sheegay cabdulaahi Dheere.
Dhanka kale madaxweynaha ayaa ka hadlay shirka ka soconaya magaalada Muqdisho oo ay soo qaban qaabisay dowlada Soomaaliya,waxaa uuna Sheegay in dowlada ay ku fashilantahay Sugida Amaan Ee dalka.
Madaxweynaha waxaa kaloo uu sheegay in Guddoomiyaha Gobalka Banaadir ahna duqa magaladda Muqdisho Jeneraal Muungaab uu lacag ku bixiyay in lasoo dilo madaxda Maamulka Banaadir State, sidii Kooxdda Al- Shabaab oo kalena rag uu u soo adeegsaday.
Masuuliyiinta Maamulka Banaadir State oo ah maamul lagu dhawaaqay dhismihiisa sanadkii 2011kii ayaa hada caburin waxaa ku haaya Duqa magaladda Muqdisho jeneral xasan maxamed Nuur Muungaab oo dhawaan loo magacaabay Gobolka Banaadir.
Share this: La Qeybso Asxaabtaada	Wasaarada Amiga: “waxaan baaq u jeedineynaa Masuuliyiinta Dowladda….”	By Staff
Apr 23, 2014	Wasaarada amniga Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa masuuliyiinta Dowladda ku jira waxa ay ugu baaqday inay muujiyaan feejignaan dheeri ah oo ku aadan ammaankooda.
Wasiir kuxigeenka Wasaarada amniga Soomaaliya Ibraahin Isaaaq Yaroow, ayaa usheegay Warbaahinta in masuuliyiinta Dowladda ku jira iyo dadka waxgalka u ah Bulshada inay ammaankooda ka taxadaraan.
Wuxuu sheegay in Al-Shabaab ay bartilmaameedsanayaan dadka Dowladda kujira, sidaasi awgeedna loo baahan yahay aragti dheeri ah oo dhanka ammaanka ku saleysan.
Dhanka kale Ibraahin Isaaq Yaroow, ayaa ku eedeyay Shabaab inaysan dooneyn horumarka Shacabka Soomaaliyeed, maadaama buu yiri ay laynayaan dadka shacabka ah.
Labadii maalin ee aan soo dhaafnay Muqdisho waxaa ka dhacay dilal kala duwan oo loo geystay labo Xildhibaan oo Dowladda ku jira, halka midkalena iminka uu yahay dhaawac.
Ammaanka Muqdisho oo ay Dowladda gacanta ku hayso, waxaa xiliyada qaar ka dhaca dilal qorsheysan oo ay masuuliyadiisa sheegtaan Ururka Al-Shabaab.
Share this: La Qeybso Asxaabtaada	Al-shabaab: “waan siiwadeynaa dilalka Xildhibaanada Baarlamaanka”	By Staff
Apr 23, 2014	Al-Shabaab ayaa waxa ay ku habjabeen inay siiwadayaan dilalka ay ugeysanayaan Xildhibaanada kujira Baarlamaanka Soomaaliya ee Muqdisho ku sugan.
Labadii maalin ee aan soo dhaafnay waxaa Muqdisho lagu dilay labo Xildhibaan oo mid gaarigiisa qarax loogu xiray lagu dilay, halka midka kalena shalay lagu toogtay Muqdisho.
Afhayeenka Guud ee Al-Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage ayaa sheegay inay siiwadayaan dilalka ay ugeysanayaan Xildhibaanada Barlamaanka ku jira.
Dhanka kale Afhayeenka guud ee Al Shabaab, ayaa ku goodiyay in ay cagta marin doonaan gebi ahaanba Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo laga duulaayo sida uu yiri, sidii meesha looga saari lahaa waxa uu ugu yeeray asnaamta la caabudo.
Cali Dheere, ayaa dagaal-yahanada Shabaabku ku booriyay in ay kordhiyeen beegsigooda ka dhanka ah Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya, oo uu fadhigoodu yahay Xarunta Somaliya ee Muqdisho.
Sikastaba Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa hada waxaa soo foodsaaray walaac dhanka ammaanka ah.
Share this: La Qeybso Asxaabtaada	Maamulka Magaaladda Jowhar oo kulan la qaatay kooxaha kubada cagta	By Staff
Feb 28, 2014	kulan ayaa ka dambeeyay ka dib markii qilaafaad hareereeyay ciyaaraha kubada cagta ee jowhar maalmihii dambe ka socday kaasi oo loogu magacdaray isdhaxgalka bulshadda.
Waxaana koobkaas ka biyadiiday inay ka qaybgalaan shankooxood iyagoona tirsaday cadaalad daro waxaan maamulka uu dhinaciisa sheegay in ay shantaan kooxood ay ganaaxeen four and five-na loogu qaaday kulamadooda.
Wuxuuna ibraahim caqiil gudoomiyaha magaaladda jowhar intaa ku daray in bari ay dhicidoonto kulan finaal ah oo ay ku hardamidoonaan kooxaha farjanno iyo nasiib iyadoo maamulkana uu cafis ugu dambayntii ufidiyay shantaas kooxood.
Finaalka bari dhicidoona marka laga soo tago ayaa waxaa soo baxay sideed kooxood oo ku soo baxay seria A oo kala ah farjano, alfurqaan, nasiib, soomaali arts, beetu raxma, sahan, iyo nation.
Share this: La Qeybso Asxaabtaada	Khilaafka Madaxda dalka oo saameyn kuyeeshay doorashooyinkii gobolka Hiiraan	By Staff
Nov 17, 2013	Guddoomiyaha Gobalka Hiiraan Cabdi Faarax Laqanyo ayaa sheegay doorashooyinka Maamulka Gobalka Hiiraan ay saameyn ku yeesheen khilaafka xoogan ee soo kala dhex-galay Madaxweynaha Dowladda Fidraalka Soomaaliya iyo Ra’iisul Wasaaraha.
Cabdi Faarax Laqanyo Guddoomiyaha Gobalka Hiiraan, ayaa Magaalada Beladweyne wuxuu ka sheegay in khilaafka ka dhextaagan madaxda dalka uu xoogaa saameeyay doorashooyinka Maamulka.
Wuxuu sheegay in doorashada ay dhaceyso balse uusan cayimeyn waqti gaar ah oo ay dhaceyso, maadaama aan la ogeyn khilaafka madaxda dowladda goorta uu xalismayo.
Doorashooyinka Gobalka Hiiraan ayaa si aad ah loogu diyaargaroobay Gobalkaasi, maadaama waqtiga Maamulka hada jira uu dhamaaday, loona baahan yahay maamul cusub oo doorasho ku yimaada.
Sikastaba Guddoomiyaha Gobalka Hiiraan ayaa shacabka reer Beladweyne ugu baaqay inay ka shaqeeyaan sidii loo sugi lahaa ammaanka Gobalkaasi, loogana hortagi lahaa weerarada Al-Shabaab ay kageystaan Beladweyne.
Share this: La Qeybso Asxaabtaada	hordhac:maxaa kala heeysto Xulalka itoobiya v nigeria ee isreebreebka koobka adduunka	By Staff
Oct 13, 2013	Xulka heysta Koobka Qaramada Afrika Nigeria ayaa u safri doona Ethiopia iyagoo kalsooni ay ka buuxdo ka hor kulanka lugta hore ee wareega ugu danbeeya Isreebreebka Koobka Adduunka ee Qaarada Afrika.
Xulka Stephen Keshi ayaa wareegii group-yada ee isreebreebka uga soo baxday iyagooo aan marnaba dhinaca dhulka dhigin seddex kulan oo ay badiyeen iyo seddex kulan oo ay barbaro galeen.
Daafaca Solomon Kwambe ayaa aaminsan in moraalka xulka uu u dhisan yahay madaama ay bishii Febraayo ku guuleysteen Koobka Qaramada Afrika.
“Waxaan nahay kooxda heysata Koobka Afrika” ayuu yiri. “Waana qasab inaan soo bandhigno waxyaabihii inaga dhigay boqorada Afrika, waa hubaal guul waan ka gaari doonaa Itoobiyaanka.
“Guul ayaa wajiga uga qoran qof walba, ciyaartoyda oo dhan waa ay dhoolacadeynayaan, taasoo cadeyn u ah in nasiibkana uu nala dhoolacadeyn doono axada.
“Jawiga xerada tababarka ah ayaa inaan guul la yaqaano ka gaareyno Ethiopia.”
Inay u soo baxaan Koobka Adduunka waxa ay la micno noqoneysaa markii shanaad ee Nigeria ay u soo baxdo Koobka, halka Ethiopia haddii ay soo baxdo ay u noqon doonto markii ugu horeysay abid ee ay u soo baxdo Koobka Adduunka.
Tababaraha xulka Itoobiya Sewnet Bishaw ayaa waxaa ka maqnaan doona Getaneh Kebede kaasoo dhaawac canqowga qaba, laakiin waxa uu kalsooni ku qabaa in kooxdiisa ay ka maarmi karto Kebede.
“Waxaa inaga maqan ciyaaryahan fiican laakiin koox ahaan waa inaan hore u socono” ayuu yiri.
Bishaw ayayna u badan tahay in Saladin Said Ahmed uu u adeegsan doono weerarkiisa iyadoo Saladin uu sida Kebede dhaliyay afar gool wareegii group-yada isreebreebka.
Share this: La Qeybso Asxaabtaada	Baarlamaanka Dowladda Soomaaliya oo guul lataaban karo gaaray (Sii Akhriso)	By Staff
Oct 09, 2013	Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku guuleystay inuu si buuxda usoo celshado mudo 44 sano ah kadib xubinnimada Midowga Baarlamaannada Caalamka inter Parliamentary Union IPU oo ay ku mideysanyihiin Baarlamaannada 165 dal oo Caalamka ah .
Xildhibaan Dr Khaalid Cumar Cali oo ku sugan Magaalada Genève ee caasimadda dalka Switzerland ayaa mar uu ka qeyb-galaaye shirka IPU waxa uu yiri: “Dadaallo farabada kadib oo uu sameeyey Gudoonka Baarlamaanka Dowladda Soomaaliya oo soo bilowday tan iyo bishii September ee sanadkii hore waxaan ku guuleysanay inaan si buuxda usoo ceshano ka mid ahaanshaha xubinnimada Midowga Baarlammaannada Caalamka oo Soomaaliya ugu dambeysay sanadka markuu ahaa 1969kii,waana guul aad u weyn oo Baarlamaanka Dowladda Fidraalka Soomaaliya uu gaaray”
Madaxweynaha Midowga Baarlammaannada Caalamka Inter Parliamentary Union IPU Ninka lagu magacaabo Abdelwahad Radi ayaa asagana waxa uu sheegay in ay kusoo dhaweenayaa Baarlamaanka Soomaaliya kamid noqoshada IPU waxa uuna yiri: “waxa ay aheyd xiriir hore oo taariikh leh markii Soomaaliya ay IPU ka tirsaneyd hadana waxaan kusoo dhaween doonnaa gacmo furan waxaana ka taageeri doonnaa hormarinta hay’addaha Dowliga ah iyo iney kusii talaabsadaan hormarro kale oo dhanka dimuqraadiyada ah”
Dhanka kale Gudoomiyaha Baarlamaanka Dowladda Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa isaguna yiri “waa qeyb ka mid ah guullaha dhanka hormarka ah ee uu ku tallaabsaday Baarlamaanka Soomaaliya sidoo kalena waa guul usoo hooyatay dowladda Soomaaliya iyo guud ahaan shacbigeeda,waxaan u mahad celinayaa hogaanka iyo dhammaanba xubnaha Midowga Baarlammaannada Caalamka ee IPU sida ay usoo dhaweeyeen Baarlamaanka Dowladda Soomaaliya islamarkaana ay isha ugu hayaan qaabka aynu u shaqeyneyno iyo guullaha aynu gaarnay mudadan kooban,runtii weli wax badan ayaa inoo harsan waxaanna Alle ka rajeyneynaa inuu noogu guuleeyo si lamid ah guushan taariikhiga ah”.
Siakastaba tallaabadan uu Baarlamaanka Dowladda Soomaaliya ugu guuleystay inuu si buuxda uga mid noqdo mudo 44 sano ah kadib midowga Baarlammaannada Caalamka ee Internal Parliament Union IPU ayaa waxey ka mid noqoneysaa guullaha waa-weyn ee uu ku tallaabsaday Baarlamaanka Soomaaliya mudada halka sanada ah oo uu jiray.
Share this: La Qeybso Asxaabtaada	Axmed Madoobe oo sheegay in ay soo dhaweenayaa ciidanka Al-shabaab iyo kuwa Barre Hiiraale	By Staff
Oct 08, 2013	Hogaamiyaha Maamulka Jubba Axmed Madoobe ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan ciidamada Barre Hiiraale iyo Al-shabaab cidii dooneyso in ay kasoo goosato.
Axmed Madoobe ayaa sheegay in maamulkooda ay nidaam ay udiyaariyeen Cid waliba oo kasoo horjeeda islamarkaana dooneeno in ay kusoo biirto maamulkooda ayadoona si uu sheegay aysan jirin wax dhibaato ay lakulmaayaan si nabad-galya ahna lagu soo dhaween doonno.
Hogaamiyaha Jubba ayaa yiri: ” Waxaan soo dhaweeneenaa ciidamada Al-shabaab iyo Kuwa Barre Hiiraale, wax dhibaataa lama kulmi doonnaa si wanaagsan ayaan ula dhaqmi doonnaa”
Dhanka kale Axmed Madoobe ayaa waxa uu baaq u jeediyay dhalinyarada Al-shabaab oo ku sheegay in ay yihiin wiilashooda Soomaaliyeed islamarkaan laqaday asagoona ugu baaqay in ay kasoo laabadashada wadada qaldan ay ku jiraan taasina oo wanaagooda ku jiro.
Ugu danbeyntii Axmed Madoobe ayaa sheegay in Barre Hiiraale iyo Ciidankiisa Kismaayo lagu geeyay doonyo hadana laga doonayo cidii halkaasi geysay in ay kasoo wado, Hase- yeeshee Saraakiisha Barre Hiiraale ayaa waxa ay u sheegeen horay in aysan marnaba suugal-noqon karin in ay isku soo dhiibaa maamulka Axmed Madoobe.
Share this: La Qeybso Asxaabtaada	Madaxweynaha dalka”Waxan digniin u dirayaa dhalinyara tahriibeysa”	By Staff
Oct 06, 2013	Madaxweynaha dalka Soomaaliya Mudane xasan sheekh Maxamuud ayaa maanta waxa uu baaq iyo digniin u diray dhalinyarada soomaaliyeed kuwaa u sii cararayo dalalka yurub iyo carabta.
Mudane Xasan Sheekh ayaa yiri: ” Dhalinyada Soomaaliyeed u sii cararya dalalka shasheeye waxaan u dirayaa digniin waxaan ogahay waxa aad kacareysaan in ay yihiin wax basiid ah waxaana ka daran meesha aad u carareysaan waxaan idinkugu baaqayaa in aadan tahriibina islamarkaana aad ka qeyb-qaadataan dhisida dalkiina hooyo”
Xasan Sheekh maxamuud Madaxweynaha dalka ayaa waxa uu tusaale u soo qaatay dhalinyarada Soomaaliyeed ee kunool dalka Talyaaniga kuwaa uu ku sheegay in ay heesato dhibaato aad u weyn islamarkaana aysan shaqeysan karin kana bixi karin dalka.
Sikastaba hadalka madaxweynaha ayaa waxa uu imaanayaa xilli maalmo kahor dhalinyo Soomaaliyeed oo tahriiba ay ku halaagsameyn badaha talyaaniga.
Share this: La Qeybso Asxaabtaada	AMISON oo il-gooniyaa ku heydo shirka ka furmayo Brussels	By Staff
Sep 14, 2013	Afhayeenka AMISON Korneel Cali Aadan Xumad oo maanta Magaalada Muqdisho ee caasimda dalka Soomaaliya ku qabtay shir jaraa’id ayaa waxa uu kaga hadlay arimo fara bdan iyo waliba shirka dhawaan ka furmi doonno Magaalada Brussele ee dalka Belgium-ka.
Korneel Xumad ayaa sheegay n ciidamada AMISON ay dalka soomaaliya wax badan ay qabteen ayna mar walba u taagan yihiin sidii ay u caawin lahaayeyn shacabka soomaaliyeed, asagoona dhanka kale tilmaamay in ay tababaro u furi doonnaa ciidamada booliska soomaaliyeed si ay u gaaraan isku filnaan asagoona cadeeye in ciimdamada AMISON ay sii joogi doonin balse hada ay u joogaan oo kaliya sidii ay u caawin lahaayeyn shacabka soomaaliyeed.
Dhankale Mudane Xamud ayaa xusay in shirka dhawaan ka furmaya magaalada Brussels natiijada kasoo bixi doonta ay rajeynayaan in ay noqo-doonto mid wax badan oo is bedel ah kusoo kordhisa dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Ugu danbeyntii Korneelka ayaa hadalkiisa ku soo qaaday dilkii loo geystay Abuu-mansuur Al-imriikii oo sheegay hadii ay arinkaasi run noqoto in AMISON ay ku farxi-doonnaa, asagoona sidoo kale cambaareeye qaraxyadii dhawan ka dhacaye Magaalada Muqdisho iyo Kismaayo.
C.llhi dayax Hoyga wararka Xaqiiqda Bartamaha
Share this: La Qeybso Asxaabtaada	Mareekanka oo sheegay in dilka Abuu-mansuur Al-imriik ay sax noqon karto	By Staff
Sep 14, 2013	Dowlada Maraykanka ayaa sheegaty in Wararka sheegay in laqaarijiyar Umar Shafik Xamami oo loo yaqaano AL-Mansuur Al-Amriki la dilay ay Macquultahay ayna tahay Warar la aaminikaro.
Dhanka kale Afhayeenka Waaxda Arimaha Dibada dalka Maraykanka Marie Harf ayaa yiri: “Maraykanka ayaa sheegatay in Marayknaku aanu hayn ilaa hada Warar xaqiiqa ah oo Xaqiijinaya Dhimashada AL-Mansuur AL-Amriki, ma cadaynkarno In AMriki uu dhintay iyo in uu Noolyahay” Maalmihii danbe ayaa waxa soo baxayay Warar sheegaya in ALMansuur Al-Amriki oo u dhashay dalka Maraykanka iyo AL-Osama AL-Birdani oo asaga u dhashay dalka Ingiriiska lagu dilay Deegaan ka tirsan Gobalka Gedo ee dalka Soomaaliya, walow aabaha dhalay AL-Mansuur uu beeniyay in la dilay Wiilkiisa.
Share this: La Qeybso Asxaabtaada	Ra’isul wasaaraha Soomaaliya oo maanta muqdisho kusoo laabtay	By Staff
Sep 11, 2013	Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyada Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa maanta dib ugu soo noqday Magaalada Muqdisho kadib markii uu safaro kusoo maray dalal ka tirsan caalamka.
Ra’isul wasaaraha jamhuuriyada dalka Saacid ayaa waxaa garoonka Muqdisho kusoo dhaweeyay xubno kamid ah labada gole ee Baarlamaanka Soomaaliya iyo qaar kamid ah shacabka reer Muqdisho.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa soo dhaweyntiisii kadib Garoonka Muqdisho ku qabtay shirjaraa’id oo uu ku faah-faahiyay heshiisyo Dowladda Soomaaliya ay la gashay Bankiga Islaamka Aduunka iyo Dowladda Yemen.
Siakastaba Safarka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya uu ku tgay dalalka caalamka ayaa sidoo kale waxa sheegay in Dowlada Yemen ay lasoo galeen heshiis ku aadan wada shaqeyn dhexmarta Dowladda Soomaaliya iyo Yemen.
Share this: La Qeybso Asxaabtaada	Tahriibayaal ubadan soomaali oo laga soo badbaadiye xeebaha Talyaaniga	By Staff
Aug 25, 2013	Inta laxaqiijiye 116 Ruux oo sida la sheegay u badan Tahriibayaal Soomaali ay Ciidamada Ilaalada Xeebaha Talyaaniga ka soonbadbaadiyeen Xeebta Siisali. Sida ay qortay Wakaalada Wararka ee AFP ayaa waxaa ay shacisay sabtidii ilaa iyo in kabadan 200 oo tahriibayaal ah laga badbaadiyay Xeebaha kala duwan ee dhaca Badda Talyaaniga inay ka badbaadiyeen Ciidamada Badbaada ee iyagu qaabilsan ilaada Xaabaha Talyaaniga.
Tahriibayaashan la badbaadiyay ayaa waxaa ay qeyb ka yihiin sida ay Wakaaladu sheegtay Kumanaanka Qof ee soo galootiga ah isla markaana ay badbaadiyeen Ciidamada sida gaarka ugu tababaran Badbaadinta Tahriibayaal farabadan oo ku soo qul qula Dalka Talyaaniga waxaana la sheegay in Tahriibayaashaasi dhamaantoodba la geeyay Xarumo Caafimaad oo sida la sheegay lagu baxnaaniyo maadaama ay soo mareen dhibaatooyin kala duwan intii ay ku soo jireen Tahriibka islamarkaana ay ugu weyn tahay dhibaatooyinkaasi Haraad iyo Qaajo.
Tahriibayaashan ayaa intabadan waxaa ay biimeeyaan Noloshaada sida ay Wakaaladu xustay iyagoo Nolol wanaagsan raadinaya mana ahan markii ugu horeesay Tahriibayaal Soomaali ah oo ay badbaadiyaan Ciidamada Ilaalada ee Badda Talyaaniga.
Share this: La Qeybso Asxaabtaada	Maamulka Gobolka Banaadir oo si kulul ula hadlay gudoomiye-yaasha dagmooyinka	By Staff
Jul 23, 2013	Iyadoo maalmihii dambe Amaanka magaalada Muqdisho uu ahaa mid aan la isku haleyn karin islamarkaana ay kasocdeen dilal qorsheysan iyo qaraxyo kala duwan ayaa waxa hadana arintaasi ka hadlay maamulka dawlada Hoose.
C/kaafi Hilowle Cusmaan oo ah Xoghayaha Dawlada Hoose ayaa sheegay inay magaalada Muqdisho amnigeeda oo sii xumaanayo ayna sabab utahay wada shaqeyn la’aan heysata shacabka iyo hogaanka degmooyinka gobolka Banaadir.
Dhanka kale Waxa uu sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan ama xilka ay ka qaadi doonaan gudoomiyihii degmadiisa ay ka dhacaan falal amaan darro ah sida uu hadalka udhigay.
Hilowle waxa uu sidoo kale ku faanay in magaalada Muqdisho ee hada ay dhihi karaan waa mid amni ah islamarkaana bambaanooyin la tuuray iyo qaraxyo ay wax nabad gelyo daro ah sameyneynin.
Share this: La Qeybso Asxaabtaada	Arin naxdinleh oo ka dhacday Magaalada Jowahar, Toloow maxay tahay? Gabar la…….	By Staff
Jul 23, 2013	Magaalada jowhar ee xarunta shabeelada dhexe ayaaaa habeenimadii xalay lagu arkay arin aad u naxdin badan oo aan horay magaalada looga arag ayadoona gabar da’deeda lagu qiyaasay 25jir la kufsaday hadana lagu gooracay.
dadla magaalada oo qaarkood lahadlay bahda saxaafada ayaa arinkaan waxa ay ku sheegeen wax diin ka bax ah in ay tahay isla markaan aan aheyn wanaagsan, ayadoona kufsiga loo geysanayo gabdha soomaaliyeed ee kunool magaalada iyo goboladaba ay soo badanayeen haba u badnaanee kuwa kufsiga loogu geysto gobolada dalka.
Arinkaan asaga ah ayaan hora looga arag magaalada asagoona noqonayo kii ugu xumaa ee kadhaca magaalada Jowhar. Su’aasha dowladda iyo shacabka soomaaliyeed hortaagan ayaa waxa ay tahay Sidee loo joojin karaa kufsiga loo geysanayo walaalaheyna soomaaliyeed ayadoo la xasuusan yahay in ay dowladda Fidraalka Soomaaliya Dilal ay ku fulisay rag nuucaan camal kufsi ugeystay gadhaha soomaaliyeed,
marka sidee isaga kaashan karaan Dowladda iyo Shacabkaba kufsiga lagu haayo hablaha soomaaliyeed??
By : Staff muqdisho– Soomaalia, webka caalamiga ah ee www.Bartamaha.com Share this: La Qeybso Asxaabtaada	Dr. Baadiyoow: “amaanka dalka Soomaaliya waa uu liitaa”	By Staff
Jul 16, 2013	Maalmihii ugu danbeeye ayaa waxa ay kulamo gaar gaar ah ka dhacayeen Magaalooyinka Kampala iyo Nairobi kuwaa ay ku shirayeen Siyaasiyiin Soomaaliyeed oo kala duwan ayaa qaarkood Dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeyay in ay ka gaabisay waxyaabihii loo idmaday.
Dr Cabdi Raxmaan Macalin Baadiyow oo ka mid ah Siyaasiinta Soomaaliyed oo la hadlay qaar ka mida bahda saxaafada ee Magaalada Muqdisho ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in Dowladda Federaalka Soomaaliya waxyaabaha qaar ay ku yeelaneyso dhaliil isagoo Carabka ku adkeeyay in ay ka gaabisay Dowladdu waxyaabihii loo idmaday eena ugu horreyso Amaanka.
Dhinaca kale Dr Baadiyow ayaa waxa uu tilmaamay in arimo badan oo loo baahnaa in ay Dowladda wax ka qabato aysan wali wax ka qaban hasa yeeshee ay SiyaasiyiintaSoomaaliyeed dib kasoo Cadeyn doonaan sida uu hadalka u dhigay.
Dhaliisha ay Siyaasiinta soomaaliyeed qaarkood ay u jeedinayaan Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay imaaneysa Xilli maalmihii ugu dambeeyay ay qaraxyo ka dhacayeen Magaalada Caasimada ah ee Muqdisho kuwaasi oo sababay qasaaro isugu jirta Dhimasho iyo Dhaawac oo kasoo gaaray Shacabka Soomaaliyeed.
War-Xaqiida kusaleysan Mar walbo meel kasto kala soco webka Caalamiga ah ee WWW.Bartamaha.com Share this: La Qeybso Asxaabtaada	Main MenuWararka